Zvakajairika theme theme Makanganiso neWordPress | Martech Zone
Izvo kudiwa kweiyo WordPress kuvandudza kunoramba kuchikura uye vangangoita vese vedu vatengi ikozvino vangave neiyo saiti yeWordPress kana yakadzamidzirwa WordPress blog. Kufamba kwakasimba - kusingadiwe nemunhu wese asi kune akawanda madingindira, plugins, uye huwandu hwakawanda hwevagadziri izvo zvine musoro. Iko kugona kushandura yako yewebhu kuvepo pasina kubvarura chikuva uye kutanga pamusoro ingori bhenefiti hombe.
Kana iwe uchinge uine WordPress saiti iwe yaunovenga, kana iwe haugone kuitisa kuti ishande sezvaungade - ingo tsvaga sosi iyo inogona kukugadzirira iwe. Kugadziriswa kweWordPress kwakangonaka chete sevanhu vakagadzira yako theme uye plugins.
Isu takave nechikumbiro chakakura zvekuti isu taifanirwa kutendeukira kumasevhisi nema subcontractors ayo anoshandura mafotopop mafaira kuenda kumatimu, kana isu tinotenga madingindira kubva kune wechitatu masevhisi. Isu tinonyatsoda themeforest yehunhu hwayo uye kusarudzwa (ndiyo yedu yekubatana chinongedzo). Iyo yepazasi mutsara, iwe haufanire kumbofanirwa kugadzirisa theme theme kunze kwekunge iwe uchiita chimwe chinhu chakanyanya kudingindira. Zvese zvirimo - mapeji, zvinyorwa, uye zvikamu, zvinofanirwa kuve zvinogadziriswa kuburikidza neako theme theme.
Kana isu tine dingindira rakagadzirwa kana isu tikatenga imwe, zvakadaro, isu tinowanzo kuwana idzi dzakajairika nyaya:
Zvikamu panzvimbo peCustom Post Mhando - Dzimwe nguva masayiti ane zvikamu zvakasiyana - seNhau, Press Releases, Product Lists, nezvimwe zvinoshanda zvakanaka mubhurogu fomati fomati paunenge uine index peji, chikamu chikamu uye ipapo mapeji ega ega kuratidza izvo zvizere zvirimo. Nekudaro, isu tinoona kuti vazhinji vanogadzira theme vanodimbudzira budiriro uye Hardcode zvikamu kuti iwe ugone kungoshandisa iyo blog kutumira izvi zvemukati. Uku kuita kwakaipisisa uye hakutore mukana weWordPress's Custom Post Mhando. Zvakare, kana iwe ukagadzirisazve ako mapoka - iwe wakamisikidzwa nekuti dingindira rinowanzo kuve rakaomeswa. Isu tinowanzoenda mukati, kukudziridza etsika post mhando, wobva washandisa plugin kushandura iyo chikamu chemaposita kune yakasarudzika post mhando.
Tsika Minda isina Yepamberi Tsika Minda Plugin - Ndiri kunyatsoshamisika kuti Yepamberi Tsika Yeminda haisati yatengwa neWordPress uye yakasanganiswa muchigadzirwa chepamoyo. Kana iwe uine zvinyorwa zvinoda rumwe ruzivo - senge vhidhiyo, kero, mepu, iframe, kana imwewo tsananguro, ACF inokutendera iwe kuronga kupinda kwezvinhu izvo zvine simba mukati medingindira rako uye woita kuti zvidikanwe, zvakatadza, kana sarudzo . ACF inofanirwa-kuve uye inofanirwa kushandiswa panzvimbo yeCustom Fields nekuda kwekutonga kwainopa pamusoro penyaya yako. Unoda vhidhiyo yakadzika pane peji reimba? Wedzera tsika yetsika iyo inongoratidzira chete mune meta bhokisi pane yako epamba peji mupepeti.
Chimiro Chemusoro - WordPress ine yakanyanya theme theme mupepeti yatinofanirwa kushandisa dzimwe nguva apo vatengi vasingatipe FTP / SFTP kuwana yekugadzirisa mafaira. Hapana chinhu chinoshungurudza sekutenga dingindira uye usina nzira yekugadzirisa masitayera, musoro, kana tsoka nekuti vakaendesa mafaira kuma subfolders. Siya mafaera ari mumudzi wedhairekitori remusoro! Kunze kwekunge iwe waisanganisira imwe fomati, panongova pasina chikonzero cheayo ese akaomarara mafomati zvimiro. Hazvina kuita sekunge iwe uchave nemazana emafaira mune theme dhata iyo yausingakwanise kuwana.
Sidebars uye Widgets - Kusava nemabhara emativi ekusanganisira mawadhi mukati mehurukuro yako zvinoshungurudza… uye nekushandisa zvakanyanya mabara epadivi nemajeti kune izvo zvingangove zviri nyore sarudzo zvinoshungurudzawo. Bhari repadivi rinofanirwa kuve rakaganhurirwa kune zvemukati izvo zvinomira mune mamwe emhando dzenyaya 'ako emapeji asi anovandudzwa nguva nenguva. Iyo inogona kuve yekufona-Ku-Chiito parutivi rwewako zvemukati. Kana inogona kunge iri kushambadzira iwe yaunoshuvira kuratidza mushure mezviri mukati. Asi haisi yepadivi uye widget chete kuratidza nhamba yefoni, semuenzaniso.
Zvakaoma-makodhi Sarudzo - Zvemagariro zvinongedzo, mifananidzo, mavhidhiyo, uye chimwe nechimwe chinhu chinofanira kuvakwa mune sarudzo dzemusoro dzinogona kuchinjika nyore. Iko hakuna chero chinhu chakanyanya sekushatisa sekufanirwa kupinda mukati yepakati theme mafaera kuwedzera pasocial profile link munzvimbo gumi dzakasiyana. Wedzera peji rekusarudza (ACF ine inowedzera-on) uye isa zvese zvigadziriro ipapo kuitira kuti vanhu vako vekutengesa vagone kuwedzera ivo kana kuchinjanisa kunze pavanowana dingindira kumusoro nekuenda.
Link Lists ndiwo Menus - WordPress raimbove nechikamu chekubatanidza uye ivo vakapedzisira vaenda nacho nekuti menyu yaive nzira yakakwana yekushandisa runyorwa rwezvinobatanidza kune zvemukati kana zvekunze zviwanikwa. Isu tinowanzoona menyu imwechete yakarongedzwa munzvimbo dzakawanda pane saiti, kana isu tinoona zvinyorwa zvinoratidzwa mune yepadivi widget. Kana rondedzero iri inzvimbo isingagumi uye yakatwasuka, yakatwasuka, kana yemhando yepamusoro… inguva yemenu.
Index maringe nePamberi Peji - Iyo indekisi peji inofanirwa kuve yakachengeterwa bhurogu yako uye ichinyora kunze zvinyorwa zvauri kugadzira. Kana iwe uchishuvira kuve neyakajairwa peji peji iyo isiri iyo blog zvinyorwa, iwe unofanirwa kuisa iyo Pamberi Peji template faira mune yako theme. Iwo Administrative> Masetting ekuverenga mukati meWordPress anotendera iwe kuti ugadzire peji raunoda kuve peji rako rekumberi uye peji ripi raunoshuvira kuve naro rako blog peji… uvashandise!
wirirana - Dingindira rega rinofanirwa kuve inoteerera kumatunhu akasiyana uye hupamhi hwepthora yezvionekwa vanhu vari kushandisa pamidziyo mbozhanhare, mapiritsi, malaptop, uye makuru maonesheni. Kana dingindira rako risingateereri, urikuzvikuvadza nekurega kupa ruzivo rwakakodzera kuchinhu chakashandiswa. Uye iwe unogona kunge uchitozvikuvadza wega nekusawana mobile yekutsvaga traffic kune yako saiti.
Imwe tsika yakakura yatiri kutanga kuona ndeye vanogadzira misoro uye vatengesi vemusoro zvakare vanosanganisira iyo WordPress yekupinza faira kuitira kuti iwe ugone kuita kuti saiti ishande chaizvo sezvinoonekwa pawakatenga iyo - uye ipapo unogona kungopinda nekugadzirisa zvirimo . Kutenga nekuisa dingindira - wobva watarisa peji risina chinhu pasina chimwe chezvinhu zvikuru uye maficha airatidzwa nemusoro wenyaya iri kuwedzera. Iyo yekudzidzira curve yakasiyana pamisoro yakaoma uye vanogadzira vanowanzo shandisa maficha zvakasiyana. Zvinyorwa zvikuru uye zvinyorwa zvemukati inzira yakanaka yekubatsira vatengi vako kubuda.
Tags: zvakanakisisa zviitoCategoriestsika mindatsika tsika postkuvandudza thememadimikirawordpress theme
Jun 29, 2014 pa10: 55AM
Imwe yakanaka posvo Doug! Kutenda nekugovana, ini ndaive nekuverenga kukuru! ..